Mampiasa drindrina Ellicott® ho an'ny asa an-tany lavitra any Japon
Source: Fitrandrahana harena an-kibon'ny tany sy fanamboarana
Mpikambana mifototra amin'ny dredging sy fanodinana tany tany am-boalohany dia mampiasa Ellicott 14 in-4 vao novidina vao haingana® Ny marika B890 dia nanala ny fantsom-pifandraisana ho an'ireo vondrom-piarahamonina nosy mitoka-monina enina any amin'ny tsipika Torres lavitra any Aostralia Avaratra sy New Guinea.
Hall Contracting Pty. Ltd., manana ny foibeny ao amin'ny Sunshine Coast ao Queensland, dia nahazo loka ho an'ny asan'ny Torres Strait avy amin'ny governemanta aostralianina.
Ny fifanarahana dia misy fantsona fandehanana amin'ny làlan-drano mivezivezy mba hanomezana vondrom-piarahamonina enina avy any Cairns fa tsy hivezivezy mankany anaty sambo kely ary hiandry ny fiantsonana.
Ny lojika miasa ao amin'ity faritra lavitra ity dia nanosika ny Hall Contracting hividy fantsona 12,000 milanja fako iray ho vata fanohanana. Ny farany faran'izay kofehy dia nasiana efitrano azo anaovana portable sy lakozia. Ny fantsom-pako mitsingevana ary ny hosotra dia entina ao anaty harato. Mpanangom-bokatra kapoaka 30T, IT18 ho an'ny asa mitondra fantsona, valan-javaboary misy tanety 18 milanja, fiara 4WD, ary fitaovana hafa noentina ivony. Ny lakandrano dia nitondra atrikasa feno, gazy an'arivony litatra, ary desalinator-rano rano.
Rehefa tonga any amin'ny nosy tsirairay dia ahena ny lalambe ary mihodina ny milina sy ny sodina. Voadio ny fantsona fantsom-pifandraisana ary ny tsipika 14-santimetatra dia ampifangaroin'ny basy an'habakabaka. Faritra iray mifatotra sy fandrika vita amin'ny silika dia vita amin'ny fahatongavan'ny Ellicott® marika dredge izay andry avy amin'ny nosy mankany amin'ny nosy ihany koa, mamela ny toetrandro.
Ny kalitaon'ny tailwater dia arahi-maso miaraka amin'ny metatra miorim-paka, satria ny nosy dia mahatsapa ny fiankinan'izy ireo amin'ny indostrian'ny jono an-toerana.
Ireo fantsona enina ao amin'ilay tetikasa dia samy hafa amin'ny habetsaky ny habetsaky ny karazan-drakitra tokony hosokirina. Ny “bommies” fasika sy tanimanga ary haran-dranomasina no fanao mahazatra amin'ireo nosy telo atsimo. Ny nosy Avaratra akaikin'i New Guinea dia misy fotaka an-dranomasina sy tanimanga mavo henjana. Ny habetsany dia manomboka amin'ny 10,000 metatra toradroa ka hatramin'ny 60,000 metatra toratelo.
“Ny Ellicott® marika dredge dia miasa tsara amin'ny samy cutter rotary sy ny kodiarana bucket ampiasaina. Ny mpandraharaha anay dia talanjona indrindra amin'ny kalitaon'ny mpandeha lavitra noho ny maha-marina azy amin'ny fametrahana ny dredge amin'ny fantsona 40 metatra ”, Nilaza i Brian Hall, talen'ny Hall Contracting.
Ny fantsom-bolo malefaka 11 misy herin'ny motera 3306T CAT ary apetraka miaraka amina winc hydraulic roa ho an'ny fisandratana dia mitondra famindrana solika sy fiovana amin'ny vatofantsika.
Ho an'ny fantsom-dranomasina, tsipìka sandoka no namboarina ary natsangana tao amin'ny atrikasan'ny orinasa mba hiditra ao ambadiky ny kalesin'ny spud amin'ny toerana mihidy. Brian Hall dia nitatitra fa ity singa ity, rehefa namboarina, nesorina ny spuds ary nikatona ny fantsom-baravarankely sy ny varavarankely, dia nanaporofo izany nandritra ny fitsangantsanganana ranomasina lava avy tany Brisbane ka hatrany amin'ny Selat Torres.
Noho ny halaviran'ireo nosy ireo dia mihazakazaka hatrany ny fandidiana ary mihodinkodina ny ekipa amin'ny alàlan'ny fiaramanidin'ny orinasa. Ny onjam-peo any amin'ny faritra dia mihazakazaka hatramin'ny valo knot ary afaka manimba ny fantsom-pitaterana sy ny vatofantsika. Na dia nahatonga fotoana sy fitaovana very aza ny toetr'andro, nitatitra i Brian Hall fa nahavita telo tamin'ny nosy enina ny orinasa ary "mialoha ny tabilao fisotroana".
Atombohy amin'ny Ellicott ny tetikasan'ny fandefasana Channel